Kunamata Points Yekusunungurwa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points YeRusununguko
Nhasi tichange tichishanda neminamato mapoinzi ekusunungurwa. Rusununguko zvinoreva rusununguko uye zvinogona zvakare kureva kutonga. Zviri muchimiro chemunhu kutsvaga rusununguko nekutonga. Zano raMwari nderekuti munhu akunde nyika. Zvisinei, dhiabhori ane nzira yekuisa munhu muuranda.
Rangarira nyaya yevaIsrealite, kwaive kuronga kwaMwari kuti vatonge, zvisinei, ivo vakarasika muEjipitori sevaranda. Ivo veIsrealite vaive vanhu vaMwari uye Mwari anoda kuti vamushumire zvakanaka, asi kune imwe nyika yakanga iri yakaoma kwavari kuti vashumire Ishe. Kuti munhu ashumire Mwari zvakanaka, anofanira kusunungurwa kubva kuzvivi, zvakaipa uye kusungwa kwemuvengi.
Huranda hwako hungave chivi, chingave chirwere kana kushungurudzwa kwemuvengi. Asi ndine nhau yakanaka kwauri nhasi, Mwari akagadzirira Kurwira iwe. Nesimba reruoko rwake rwerudyi achaita kuti Chiso chake chivhenekere pamusoro pako uye iwe uchasunungurwa. Rusununguko haruuyi nesimba remaoko edu anofa, rwunouya nemweya waMwari. Chero patinoitwa varanda, ndiyo nguva chaiyo yekushevedzera kuna Mwari kuti vasunungurwe. Kuna Iye anokwanisa kutisunungura kubva muhusungwa hwechivi nehuranda.
Ndinoraira netsitsi dzaMwari, paunotanga kushandisa gwara remunamato, dai iwe uchinge wasunungurwa kubva kumarudzi ese euranda muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzakandiona ndakafanira kuona zuva rakadai. Ndinokutendai nemaropafadzo enyu uye nerondedzero pamusoro pehupenyu hwangu, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu mundinunure kubva muhusungwa hwehuranda muzita raJesu. Munzira dzese dzandakaitwa muranda, ndinonamatira Rusununguko muzita raJesu. Ishe, rugwaro runoti pane mweya waMwari, pane rusununguko. Ndinonamata kuti mweya waMwari uve pamusoro pangu muzita raJesu.
Baba Tenzi, rugwaro rwunoita kuti ndinzwisise kuti takashevedzwa kuti tive vakasununguka. Ndinozivisa rusununguko kubva nhasi nemaoko enyu ane simba. Ini handicharamba kuva muranda wechivi zvakare muzita raJesu.
Munzira dzese idzo chivi chakandiita kuti ndisagone, ndinonamata kuti simba rako rindisunungure muzita raJesu.
Ini ndinotyora joko rega rehuranda muhupenyu hwangu nemoto wemweya mutsvene. Chinyorwa chinoti nekukwizisa joko rese richaparadzwa. Joko rese rehuranda, ndinoraira nekuzodzwa kweMweya Mutsvene, rega joko rakadai riparadzwe nemoto muzita raJesu.
Ishe, rugwaro runoti uye vakamukunda neropa regwayana uye nemashoko echipupuriro chavo. Ndinoraira nesimba reropa rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, rega rega joki remadhimoni rehuranda rityorwe muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nemasimba ese ekudzvanyirira ari pamusoro pehupenyu hwangu. Chero chimiro chehofori chiri kunditadzisa, chinowira kurufu muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa ndezverusununguko kuti Kristu akatisunungura, ndinotema nerusununguko nhasi muzita raJesu.
Tenzi, ndinosangana nejoko rose rezvitadzo muhupenyu hwangu nemuzita raJesu. Joko roga rezvitadzo muhupenyu hwangu raparadzwa nhasi muzita raJesu. Joko roga rezvivi rakaiswa pandiri nemuvengi, tsemura nhasi muzita raJesu.
Ishe ndinoraira netsitsi dzeWekumusoro-soro, kusungwa kwese kwechivi muhupenyu hwangu, kudambura nhasi muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinodambura zvisungo zvese zvinondisunga nehusungwa nemoto weMweya Mutsvene. Ndinokumbira kuti moto weMweya Mutsvene undibatanidze kubva pasungano yese yehuranda iri kutonga hupenyu hwangu muzita raJesu.
Ndinonamata kuti nesimba reropa rakadeurwa pamuchinjikwa wecalvary, iwe uparadze chibvumirano chose chehuranda muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Simba rega rega rekuganhurirwa muhupenyu hwangu, ndinoriparadza nemoto muzita raJesu. Ngetani dzese dzehuranda idzo zvivi dzakandikanda mukati dzinoparadzwa nemoto muzita raJesu.
Ishe, nechikonzero chesungano nyowani yakaitwa kuti iite kuburikidza neropa raKristu, ndinouya kuzopesana nesungano yega yega inoshanda inopesana neupenyu hwangu muzita raJesu.
Rugwaro runoti iye uyo Mwanakomana akasunungura akasununguka zvirokwazvo. Ini ndinoraira kubva nhasi ndinotanga kugara murusununguko muzita raJesu. Kubva nhasi, ndinotaura kusunungurwa kwangu kuva kwechokwadi muzita raJesu.
Ndinonamata netsitsi dzaIshe, chero wawakagadzirira kundibatsira kubva muhuranda hwemari, ndinonamata kuti undibatanidze nemunhu akadaro muzita ra.
Ndinoraira nemvumo yedenga, kusunungurwa kwangu kwemari kwauya muzita raJesu. Ini ndaramba kuva muranda wemari, kubva nhasi, mari ichandipindura muzita raJesu.
Ndinoraira kubva nhasi handichisiri muranda wehurwere muzita raJesu. Ndinoraira nesimba rematenga, ndakasununguka kubva muhusungwa hwese hwehurwere muzita raJesu. Ndatora sununguro yangu kubva mukurwara nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinokutendai nekuti handichisiri muranda wechivi. Ndinokutendai nekuti ndakawana simba rangu kuburikidza neropa raKristu. Ndinokutendai kuti kusunungurwa kwangu kunoitwa kwechokwadi muzita raJesu. Ndinokukudzai nekundinunura kubva muhusungwa hwezvivi, ndinokutendai nekuve nhovo yangu nenhovo yangu, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ndinotema nemasimba kuti handichazove muranda wechivi zvakare muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Points Kurwisa Hondo YeBarika Barika
inoteveraKunamata Points YeIsita (Ressurection)
Kuputsa iyo Yoke Yakafadza Mapepa eChinamato
Yakasimba Chiziviso Munamato Kuparadza Chakaipa Sungano
15 Kununura munamato pamweya inozivikanwa